Sitsalele umnxeba: + 8613832728087
Ubuso obuphindwe kabini
Ithe nkqo kwaye ithe tye
Umatshini we-laminating ozenzekelayo wesantya esiphezulu Uqwalaselo olulodwa
ngu admin on 21-11-14
Iphepha lobuso kunye nephepha elisezantsi lamkele ukulandelwa kwe-servo ye-fiber optical, ukuchaneka kwe-lamination kuchaneka ngakumbi, ngaphandle kohlengahlengiso lwezandla ngaphambi nasemva. I-fiber ye-optical yangaphambili nasemva kwesobunxele nasekunene ibona umkhondo wokuhamba kwephepha, kwaye i-alamu iyayeka xa iphepha lihamba ngokungalunganga. ...
Intshayelelo kwiimpawu zesixhobo Imodeli luhlobo lwekhompyuter oluzenzekela ngokupheleleyo, ukumiswa kwenkqubo kulungelelaniswa ngokuzenzekelayo kuwo wonke umatshini, ubude nobubanzi bephepha kuphela igalelo kujongano lomatshini womntu, kwaye umatshini ulungelelaniswa ngokuzenzekelayo kwiplac. ...
Umzi-mveliso wethu ugxile ekuveliseni umgca wemveliso wekhathoni yekhadibhodi iminyaka engama-30. Iimveliso zethu eziphambili zingumgca wokuvelisa ibhodi, umatshini wokulambisa ozenzekelayo, umatshini wokuhlamba we-semi-automatic, umatshini webhokisi yesikhonkwane ozenzekelayo, umatshini webhokisi yesikhonkwane, i-h ...
SQDJ-2500/2800 Isiqwenga ezibini esizenzekelayo kwibhokisi yesikhonkwane sokumisela umatshini
ngu admin on 21-09-10
A. Isebe lokutyisa iphepha: 1. Injini ephambili ithatha umgaqo wesantya sokuguqulwa kwamaza, inkqubo ayinamsindo, kwaye umgaqo wesantya uguquguqukayo kwaye uzinzile. 2. Indlela yokutya yephepha kabini-servo yamkelwa ukwenza uhlengahlengiso oluzinzile, olusebenzayo kwaye oluchanekileyo. 3. Inxalenye yokutyisa iphepha langaphambili...
Intloko yokushicilela igcina engqondweni: imbangela yokugqoka i-rubber roller kunye neengcebiso zokugcina
Iingcebiso zokugcina Ukwandisa ubomi benkonzo yerola ye-inki, iingcaphephe zeteknoloji yoshicilelo zicebisa ukuba kumsebenzi wokwenene, nceda ugcine oku kulandelayo engqondweni: ① Uhlengahlengiso loxinzelelo lwerola ye-inki kufuneka luhlangabezane neemfuno, kwaye uxinzelelo lwerola yeplate kufuneka lube ijongiwe qho ngeveki....
Iirola zerabha zomatshini wokushicilela (kubandakanywa iirola zamanzi kunye neerola ze-inki) zidlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yokushicilela, kodwa kwimveliso yokwenene, iinkampani ezininzi zokushicilela ziya kuthatha indawo yeerola zokuqala zerabha ngokukhawuleza emva kokusetyenziswa. Uninzi lwabavelisi banococeko olungonelanga kunye...
ZJ-V5B hydraulic shaftless mill stand stand ※ uphawu lolwakhiwo: ★adopt hydraulic drive ukugqiba ukugoqoza kwephepha, ukukhulula, ukususa okuphakathi, ukuguqulela ekhohlo nasekunene kunye nokunye, ukuphakanyiswa kwephepha kwamkela idrive yehydraulic. ★i-brake adjustable isebenzisa inkqubo yokuqhobosha amanqaku amaninzi. ★nanini...
Automactic inline flexo ifolda yegluer
Ngomatshini wokushicilela uquka inkqubo yokugqibela yomgca wokuvelisa ibhokisi yebhokisi, ukuprinta, slotting, ukusonga, ukuncamathelisa nokubala kwekhadibhodi kunokugqitywa ngokujika, kwenziwe lula kakhulu iinkqubo zemveliso yebhokisi yebhokisi. Umatshini opheleleyo wamacandelo ombane ukhetha amazwe ngamazwe...
IIntsilelo EZIQHELEKILEYO KUNYE NEMIQATHANGO YOKUXHWA KOMDA WOKUVELISWA KWEBHODI YOTONA (2)
ngu admin on 21-07-08
3 ukusika, iphepha alinakuzenzela...
IIntsilelo EZIQHELEKILEYO KUNYE NEMIQATHANGO YOMDA WOKUVELISWA KWEBHODI YOTONA
1. Ukubambelela kakubi (i-glue evulekileyo, i-glue fake) Ukusebenza kukuba: emva kokunamathela kokuqala kwekhadibhodi imizuzu emi-5, phantsi kwesenzo samandla angaphandle, ngaphakathi, umphezulu okanye i-A, B tiles okanye isangweji zihlulwe ngokupheleleyo. , kwaye yonke imicu yephepha imile, ayilalwa, kwaye...
Ukungaphumeleli okuqhelekileyo kunye nokuchasana nomgca wokuvelisa ibhodi edibeneyo
Ulwazi olunxulumene neshishini loomatshini bokupakisha bebhokisi
ngu admin on 21-06-26
Iphepha lenziwe ikakhulu ngomthi, i-bamboo pulp, kunye nengca equlethe izinto ezahlukeneyo zefiber. Ubukhulu bephepha eliveliswe yi-mill yephepha, okanye elakhiwe kwiphepha kunye nekhadibhodi. Kodwa umgca awungqongqo. Ngokuqhelekileyo, ubunzima besiseko bungaphantsi kwe-200 g / m okanye ngaphantsi kwe-0.1 mm ubukhulu. Kol...
Umatshini wokwenza ibhokisi yetyati/Umatshini omnye weface
Umatshini wecala elinye uquka isibambi somqulu kunye nomatshini wokwenza i-corrugated onecala elinye. Okokuqala, i-corrugated core paper ishushu, kwaye emva koko i-corrugated roll isetyenziselwa ukwenza umzobo ofunekayo. Ekugqibeleni, iglu (i-starch adhesive) isetyenziswe kwincopho ye-corrugated kunye ne-combi ...
Kwiminyaka emininzi, ngenxa yomgangatho ophezulu weemveliso zenkampani yam, abathengi abaninzi baye bakhetha iimveliso zethu, Phakathi kwabo ngabathengi abavela eTurkmenistan, Bathenga i-1800 uhlobo lwe-3 corrugated cardboard production line, Isetyenziswe iminyaka emithathu, i-Customer Feedba. ..
Yiba neqela elinamandla emva kokuthengisa, ukulungisa izixhobo zexesha elide kunye nokugcinwa kwezinto kwilizwe lonke
ngu admin nge 21-03-10
[Inkcazelo eShwankathelo] I-Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. ifumaneka kumazantsi ekomkhulu laseBeijing nakumantla eJinan. Inamanzi afanelekileyo kunye nokuhamba komhlaba. Lishishini lobuchwephesha elinesikali esikhulu sokuvelisa oomatshini bebhokisi kunye nemveliso...
Itekhnoloji | Uluhlu lwe-crux yelahleko yebhokisi kunye namanyathelo okuphucula.
Ilahleko yamashishini eebhokisi ngoyena mba uchaphazela iindleko. Ukuba ilahleko ilawulwa, inokunyusa ukusebenza kakuhle kweshishini kumlinganiselo omkhulu kwaye iphucule ukukhuphisana kweemveliso. Makhe sihlalutye iilahleko ezahlukeneyo kumzi-mveliso weebhokisi. Ukuyibeka ngokulula, i...
Jonga isizathu sokuba ubude bekhadibhodi buguquguquke.
Xa kufikwa ekunqongophelweni kwekhadibhodi yentsimbi, abantu abaninzi baya kucinga ngekhadibhodi yentsimbi. Enyanisweni, le nto ayifani ne-inverted. Kuyacetyiswa ukuba aphande kwimiba emininzi efana nemathiriyeli ekrwada, oomatshini bethayile enye, iiflyovers, oomatshini bokuncamathelisa, amabhanti okuhambisa, p...
I-3km emazantsi esixeko saseDongguang kwimpuma ye-104 yendlela yelizwe